Halista Tahiirbka Sharci darrada ah ee ka Yimaadda Soomaaliya - The Migrant Project
Halista Tahiirbka Sharci darrada ah ee ka Yimaadda Soomaaliya
Ma tahay qof ku talo jira in uu Yurub ku tago si sharci darro ah ama ma garanaysaa qof sidaas raba. Si kale haddii loo dhigo, ma ku fikiraysaa in aad u socdaasho Yurub dal-ku-gal sharci ah la’aantii, ama dukumenti la’aan ama se aad socdaasho adiga oo aan marin baadhitaanka sharciga ah ee xuduudaha.
Safarka ka soo baxa Soomaaliya ee soo mara Itoobiya ilaa Yurub waa mid aad u halis badan. Tallaabo kasta oo socdaalka ka mid ah waxa ay tahriibayaashu u nugul yihiin in ay silciyaan magafayaasha iyo shabakadda dambiilayaasha ahi.
Si lagaaga caawiyo samaynta go’aan ka-war-qab leh oo ku saabsan tahriibka, waxa aanu kuu soo koobaynaa qaar ka mid ah khataraha laga siman yahay ee ay wajahaan tahriibayaasha sharci darrada ahi.
Tahriibayaasha ka socda Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay isku dayaan in ay Yurub ku gaadhaan qaabab tiro badan, sida in ay ku...
Ma la yaaban tahay kharashka ku baxa in la gaadho Yurub marka laga yimaaddo Soomaaliya iyo Itoobiya ee aanad haysan dal-ku-gal?...
Socdaalka ka soo bilaabma Geeska Afrika ilaa Yurub aad ayuu halis ugu yahay haweenka iyo carruurta Soomaalida ah. Haween iyo...